Ndị na -emepụta ihe na ndị na -ebubata ya China Bot Bottle IV Ngwọta Ngwọta IV IVEN
Line Production Ngwọta IV - karama rọba LVP
Usoro mmepụta akpaaka PP karama IV na-agụnye akụrụngwa setịpụrụ 3, igwe ntinye preform/hanger, igwe na-afụ karama, igwe ịsa ihe na-asacha. Mmepụta akara nwere atụmatụ nke akpaka, humanized na ọgụgụ isi na arụmọrụ kwụsiri ike na ndozi ngwa ngwa. Arụmọrụ dị elu yana ọnụ ahịa nrụpụta dị ala, yana ngwaahịa dị elu nke bụ nhọrọ kacha mma maka karama plastik IV ngwọta.
Preform/hanga Ọgwụ igwe
+ Igwe na -afụ karama
+ Igwe ịsa ihe na-eju afọ
Enwere ike itinye ya na 50-5000ml akpa rọba na-abụghị PVC maka ngwọta n'ozuzu, ihe ngwọta pụrụ iche, ọgwụ ịsa ahụ, nri nne na nna, ọgwụ nje, ogbugba mmiri mmiri na ihe na-egbu egbu wdg.
Eyi karama ịfụ igwe
Wepu ọdụ ọdụ ụgbọ mmiri:
A na -etinye ọtụtụ preforms na hopper, mgbe ahụ, usoro nri nri rotary preforms na -ebupụta preform site na onye na -ebufe ya. N'onwe kwụ kwụwara ekewa preform na -achịkwa nkeji ịghasa preform loading.
Nhazi dị iche, ntụgharị, ịhazigharị ịha nhatanha maka preform:
A na -ekewa preforms na anya nha anya wee nyefee ya na diski rotary vetikal, wee tụgharịa ya site na ogo 180 wee kwaga na preforms ndokwa ọzọ. Enweghị mkpọchi preform na enweghị ntụpọ na ọnọdụ ziri ezi.
Preform kpo oku:
Ahịrị okpukpu abụọ nke igbe ọkụ ọkụ, mgbasa ọkụ dị mma, nnọchi na ndozi dị mfe.
Preform na -ewere, preform na usoro nnyefe karama:
Servo mepere emepe ụdị nnyefe mgbanwe, cam na -ejigide mkpịsị aka na -enweghị mpempe plastik na ntụ ntụ iji hụ na ịdị mma ngwaahịa.
Usoro nnwere onwe na ịgbatị onwe onye:
Ọ na -ewepụta ihe eji eme akara akara iche, nke anaghị egbochi ibe ya. Ezi akara ịfụ karama ahụ, enweghị mgbapụta. Mkpanaka mkpanaka na -agbagharị site na otu sistemụ servo.
Usoro mmeghe na mmechi akpụzi:
Mgbe a na -ebugharị preforms na ọdụ ikuku na -egbu karama, sistemụ servo na -eme ka ogwe aka na -amịgharị ka ọ na -akwanye mgbachi maka mmeghe na mmechi mmezu iji nweta ọrụ abụọ.
A na -ewepụta karama ndị okokụre n'ọdụ ụgbọ oloko. Ndị na-emegharị ihe na-ejikọ usoro na-eburu ha ma na-ebunye ya na igwe na-asacha ihe na-asacha iji mejupụta mmepụta njikọ ụgbọ ala.
1.Servo mbanye ma kwụsie ike n'oge ngagharị dị elu, idobe ya ziri ezi, na-adịgide adịgide, na ọnụ ahịa mmezi dị ala.
2.The cam clamping mkpịsị aka enweghị plastic nchacha na ntụ ntụ iji hụ na ngwaahịa mma.
3.Ike nrụpụta dị elu: sitere na karama 4000-15000 kwa elekere.
4.Emechiri usoro ihe eji emechi emechi, ogologo etiti etiti, mgbaaka na ihe ndị ọzọ si mba ọzọ enweghị ike ịbanye na yinye, mmezi dị mfe.
5. Ihe akara ahụ anaghị agbaze ikuku, melite arụmọrụ ịfụ ọkụ, belata karama na -akpụ oge.
Nka na ụzụ nkọwa:
Item Ụdị igwe
Ike imeputa ihe 500 ml 4000BPH 6000BPH 8000BPH 10000BPH 12000BPH
Ogologo karama Max mm 240 230
Max elu preform (na olu) mm 120 95
Mkpọkọta ikuku (m³/min) 8-10bar 3 3 4.2 4.2 4.5
Mmiri jụrụ oyi (m³/h) 10 Celsius C (nrụgide: 3.5-4bar) 8HP 4 4 7.87 7.87 8-10
Mmiri jụrụ oyi 25 Celsius C (nrụgide: 2.5-3bar) 6 10 8 8 8-10
Ibu T 7.5 11 13.5 14 15
Ogo igwe (yana itinye preform) (L × W × H) (MM) 6500*4300*3500 8892*4800*3400 9450*4337*3400 10730x4337x3400 12960 × 5477 × 3715
PP Igwe ịsa ihe na-ejuputa igwe
Ebe a na -enye karama
Ọ na -ejikọ njikọ dị n'etiti ebugharị egwu na wheel ịkpọ oku karama, na -ejikọ mkpọchi a iji nyefe ya, yana ikuku ikuku dị ọcha iji mee ka nnyefe ahụ dị ngwa, na -enweghị ọkọ.
Ụlọ ọrụ ịsa ahụ ikuku ionic
Ụkpụrụ nhicha na usoro a bụ: tugharịa karama ahụ; ọkpọ mmiri na -amịpụta cam iji kpuchie ọnụ karama; ọkpọkọ ikuku ionic na -ebilikwa na karama ahụ; a na -afanye ikuku ikuku na -adanye n'ime ọkpọ na -afụ ọkụ iji hichaa karama n'ime karama ahụ;
Na n'otu oge na -a theụ irighiri ihe ndị dị n'ime ikuku na -esi na karama ahụ apụta.
Ụlọ ahịa mmanụ
A na -ebuga karama plastik ahụ a sachara na ọdụ mmanụ site na onye na -emegharị ihe, ihe na -emeju mmiri na -achọpụta karama plastik maka ndochi. A kwadebere akụkụ dị elu nke ebe a na-emeju mmanụ tank mmiri nguzogide mgbe niile. Mgbe mmiri mmiri juputara tankị itule wee rute n'ọkwa ntọala, mmiri mmiri na -enye valvụ diaphragm pneumatic na -emechi.
Ọkụ ịgbaze ọkụ na -agbaze
A na-ejikarị ọdụ ụgbọ elu a na-agbachi okpu nke karama infusion plastik mgbe emejuchara ya. Ọ na-eburu efere kpo oku okpukpu abụọ iji kpoo okpu na ọdụ ụgbọ mmiri dị iche iche, mechie ịgbado ọkụ n'ụdị na-agbaze agbaze. The kpo oku okpomọkụ na oge bụ mgbanwe.
Ụlọ ọrụ na -enyefe karama
A na -ebuga karama ndị ahụ emechiri emechi na egwu na -ewepụta karama site na ọdụ na -emepụta karama, wee banye n'usoro ọzọ.
1.Na njuputa zuru oke; ịhazigharị ikuku ziri ezi, nwere ike ijikwa ogo mbibi nke karama ahụ mgbe ịmịchara ụlọ.
2. Ọ nweghị karama enweghị ndochi, ọ nweghị karama enweghị mkpuchi.
3.Ọ nwere ike iru ike ruo 15,000BPH, dabere na arịrịọ ndị ahịa.
4.E nwere ụdị okpu dị iche iche nke enwere ike itinye n'ọrụ na karama ikpeazụ: okpu Euro kpuchiri ekpuchi; Kaa akara Irrigation okpu; Ịghasa okpu; Ihe nkwụsị na Aluminium okpu.
5.Ọ nwere ọrụ nhicha GMP zuru oke na arụ ọrụ sterilization.
XGF (Ajụjụ)/30/24/24 XGF30/30/24/24 XGF (Ajụjụ)/36/30/36 XGF (Ajụjụ)/50/40/56
Ike imeputa ihe 100 ml 7000BPH 7000BPH 9000BPH 14000BPH
500 ml 6000BPH 6000BPH 7200BPH 12000BPH
Ogo karama dabara adaba ml 50/100/250/500/1000
Ikuku ikuku 0.5-0.7Mpa 3m3/min 3m3/min 3m3/min 4-6m3/min
Nri WFI 0.2-0.25Mpa 1-1.5m3/h
Ibu igwe T 6 6.5 7 9
Ogo igwe mm 4.3*2.1*2.2 5.76*2.1*2.2 4.47*1.9*2.2 6.6*3.3*2.2
Ike oriri Isi moto 4 4 4 4
Ihe mkpuchi oscillator 0,5 0,5
Ionic ikuku 0.25*6 0.25*5
Igwe eji ebu ihe 0.37*2 0.37*2
Efere efere 6*2 6*2
Production akara atụmatụ:
1.Ọ nwere ike zute mmepụta nke nha dị iche iche (100-1000ml).
2.Ọ na-etinye maka karama PP ọkọlọtọ na karama PP dị nro dara ada.
3.Tinye ụdị akpa dị iche iche: gburugburu, oval, oge ufodu, wdg.
4.Ike nrụpụta dị elu: sitere na karama 4000-15000 kwa elekere.
5. Akụrụngwa egbughị maka mmepụta otu karama 500 ml PP bụ 0%.
Ngwa n'ụlọ ọgwụ:
Nke gara aga: Ampoule Na -ejuputa Mmepụta Mmepụta
Osote: Line Production akpa na-abụghị PVC
Igwe na -agbaji karama iko
Igwe eji egbutu karama iko
Ndị na -emepụta igwe karama iko
Igwe akpa Iv akpa
Igwe Na -ejuputa Liquid
Igwe eji emeju ọgwụ na China
Igwe Ampoule À Coudre Singer, Disposable ntụtụ & agịga Production Line, Igwe Njuputa Ejuju Ejupụtara, Igwe eji emejuola agịga, Igwe Ampoule À Coudre Led, Ampoule Machine À Coudre Bernina,